PDF Onye nhazi 1.2.0: ohuru nke ihe osise ihe osise iji megharia PDF | Site na Linux
PDF ndokwa 1.2.0: ọhụrụ mbipute nke onyeicalzi ngwá ọrụ ịgbanwe PDF
PDF Onye nhazi 1.2.0 bụ ụdị ọhụrụ nke ngwa ọrụ eserese a iji gbanwee faịlụ na usoro PDF. O dakọtara na Linux ma gụnye ụfọdụ mmelite na mwepụta ọhụụ a, dịka ụzọ mkpirisi keyboard, mbupụ metadata, chinchi echekwara na ndị ọzọ. Maka ndị gị na-amabeghị PDF Arranger, mana ọ bụ ngwa ọrụ nwere oghere ma mepee bụ ndụdụ nke sọftụwia PDF-Shuffler. Nke a software e emelitere kemgbe April 2012 na PDF Arranger na-abịa ịkpọlite ​​koodu nke kwuru hapụrụ oru ngo.
PDF ndokwa na-adabere na Python 3 na ọba akwụkwọ eserese GTK3 maka okike ya, ma ugbu a ewerela nzọụkwụ ọzọ na mmepe na v1.2.0 dị ka anyị na-aza. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ngwá ọrụ a na distro gị, ọ dị na ụfọdụ n'ime nchekwa dị mkpa nke distros kachasị ewu ewu. I nwekwara ike ibudata koodu iyi ma kpokọta ya site na weebụsaịtị GitHub nke oru ngo a, ebe a ga-enwekwa ọnụọgụ abụọ maka Windows.
Na usoro nke ihe dị ọhụrụ na PDF Onye nhazi 1.2.0:
Boardzọ mkpirisi kiiboodu +/- ka mbugharị, c imeghe okwu, agbakwunyela Ctrl + Left / Right iji bugharia ogo 90 ma ọ bụ -90.
Ọzọkwa, usoro ihe omume ga-echeta window size ma ọ bụ maximization ọnọdụ na mbugharị larịị maka oge ọzọ ị na-emeghe window.
Thumbnails na-kwekọọ n'aka ekpe na n'elu ma si otú ahụ na-eme oke na ohere oghere.
Edegharịrị okwu ahụ na ahụmịhe banyere nke a ka mma.
Mepụta thumbnails mgbe mbugharị, ya bụ, nke thumbnails. Nke a kwesịrị idozi ugbu a maka ịgbanye mgbe ebupụtara ya.
Nkwado maka faịlụ PDF ọzọ
Edere metadata nke mbụ maka mbupụ
E meziwanyela ntụgharị asụsụ, ọkachasị maka asụsụ German.
E meziela ụfọdụ chinchi dị na nsụgharị ndị gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » PDF ndokwa 1.2.0: ọhụrụ mbipute nke onyeicalzi ngwá ọrụ ịgbanwe PDF
Ndewo, ị maara ma ọ dị na nchekwa nke debian 9? Kedu ka m ga - esi wụnye ya site na usoro iwu na ọnụ? Daalụ
Zaghachi Juan Martin
WordPress: omume 10 dị mma maka usoro nchekwa maka weebụsaịtị
Ngwa KDE 19.04 na-enweta mmelite mmezi mbụ ya